Rusununguko Rwekuparidza muDominican Republic | Bhuku Regore ra2015
Pakasvika 1960, udzvinyiriri hwaTrujillo hwainge hwava kupikiswa nevakawanda munyika make uye nenyika dzakawanda. Zvematongerwo enyika pazvaipisa kudaro, Milton Henschel uyo akabva kumahofisi edu makuru akashanyira nyika yacho ndokupinda gungano remazuva matatu muna January 1961. Vanhu 957 vakateerera hurukuro yavose uye 27 vakabhabhatidzwa. Panguva yavakashanya, Hama Henschel vakabatsira hama kuti dzitange kurongazve basa uye kugadzira mepu dzendima.
Vatariri vematunhu vaviri, Hama Enrique Glass naHama Julián López, vakapiwa basa rekushanyira ungano. Julián anoti: “Dunhu rangu raibatanidza ungano mbiri dzaiva kumabvazuva kwenyika yacho nedzese dzaiva kuchamhembe. Dunhu raEnrique raiva neungano dzese dzaisara kumabvazuva nedzese dzaiva kumaodzanyemba.” Kushanya ikoko kwakaita kuti ungano dzitangezve kukurukura nesangano uye kwakasimbisa hama pakunamata.
Salvino naHelen Ferrari vachienda kuDominican Republic, muna 1961
Salvino naHelen Ferrari, avo vakapinda kirasi yechipiri yechikoro cheGiriyedhi, vakasvika muna 1961. Ruzivo rwavakawana pavaishanda semamishinari kuCuba rwakabatsira chaizvo pabasa guru rekukohwa muDominican Republic. Salvino akazoshanda senhengo yeDare Rebazi kusvikira paakazofa muna 1997, uye Helen ava nemakore 79 ari mubasa renguva yakazara, uye pamakore aya, akawanda acho aishanda semumishinari.
Salvino naHelen Ferrari vachangosvika, kutonga kweutsinye kwaTrujillo kwakangoerekana kwaguma usiku hwemusi wa30 May 1961, vanhu vakamuuraya pavakasakadza motokari yake nemabara. Zvisinei, kuurayiwa kwake hakuna kuita kuti zvematongerwo enyika zvigadzikane, saka munyika yacho makaramba muine nyonganyonga kwemakore akati kuti.
Basa Rekuparidza Rinoenderera Mberi
Panguva iyoyo mamwe mamishinari akabva asvika. William Dingman wekirasi yekutanga yechikoro cheGiriyedhi nemudzimai wake Estelle, pamwe chete naThelma Critz naFlossie Coroneos, vakachinjwa kubva kubazi rePuerto Rico vachiendeswa kuDominican Republic pashure pemazuva maviri chete Trujillo aurayiwa. William anoti: “Munyika yacho maiva nenyonganyonga patakasvika, uye taigara tichisangana nemasoja. Vanhu vaityira kuti paigona kungoita chimurenga, uye masoja aisecha vanhu vese mumigwagwa mikuru. Takamiswa kakawanda, uye pese pataimiswa zvinhu zvedu zvaisechwa. Zvinhu zvedu zvese zvaibudiswa mumasutukesi, kunyange tunhu tudiki-diki.” Zvainge zvakaoma kuparidza panguva iyoyo nekuti zvematongerwo enyika zvainge zvisina kugadzikana.
Thelma Critz uye Estelle naWilliam Dingman vachiri munyika iyi pashure pemakore 67 vachishingaira mubasa reumishinari
William anoti: “Panguva yaitonga Trujillo, vanhu vazhinji vainge vaudzwa kuti Zvapupu zvaJehovha vanhu vechiCommunist uye kuti vakaipa zvikuru. . . . Zvisinei, zvishoma nezvishoma takakwanisa kuita kuti vanhu vatinzwisise.” Kuwedzera kwebasa kwakaita kuti vanhu vakawanda vatange kuteerera mashoko eUmambo. Pakazopera gore rebasa ra1961 munyika yacho makanga mava nemapiyona chaiwo 33.